UPVC မြို့ရိုးကို panel ကို T1110 - တရုတ်ဟူဘေး Shengyu အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ
Shengyu UPVC မြို့ရိုးကို panelt မြို့ရိုးကိုဝတ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သစ်တစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ3အလွှာ Co-extrusion နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဒါဟာသတ္တုနှင့်သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်ထက် သာ. ကောင်း၏, ခက်ခဲတဲ့အရောင်အတွက်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ပို. အရေးကြီးသည်ကအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပန်းခြံအတွင်းရှိသံချေးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ UPVC မြို့ရိုးကို panel ကထင်ရှားတဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူအက်ဆစ်, မှိုများနှင့်စိုထိုင်းဆကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ80ºCမှ-40ºC၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုအတွက်တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။ UPVC မြို့ရိုးကို panel ကို၏ Anti-ချေးစွမ်းဆောင်မှုအရှိဆုံး application များအတွက်သင့်လျော်သည် ...
FOB စျေး: 2.99-7.99 / စတုရန်းမီတာ
Shengyu UPVC မြို့ရိုးကို panelt မြို့ရိုးကိုဝတ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သစ်တစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ3အလွှာ Co-extrusion နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဒါဟာသတ္တုနှင့်သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်ထက် သာ. ကောင်း၏, ခက်ခဲတဲ့အရောင်အတွက်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ပို. အရေးကြီးသည်ကအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပန်းခြံအတွင်းရှိသံချေးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ UPVC မြို့ရိုးကို panel ကထင်ရှားတဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူအက်ဆစ်, မှိုများနှင့်စိုထိုင်းဆကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ80ºCမှ-40ºC၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုအတွက်တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။
UPVC မြို့ရိုးကို panel ကို၏ Anti-ချေးစွမ်းဆောင်ရည်အထူးသဖြင့်ဓာတုစက်မှုဇုန်အတွက်ပြင်းထန်လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူပါဆုံးပြင်းထန်ဆားမြူချေးတွေနဲ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ applications များ, နှင့်ဒေသများအဘို့သင့်လျော်သည်။
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1110mm 1050mm 800mm လိုအပ်သလို 3.2-6.0KG / ㎡ ခြောမှတျတောကျပသော အဖြူ, အပြာ
ယခင်: ASA UPVC မြှောင်းပုံခေါင်မိုးစာရွက် W1025
နောက်တစ်ခု: FRP မိုဃ်းလင်းစာရွက် TT980
Clear ကို PVC ခေါင်မိုး Panel ကို
Fiber ခေါင်မိုး Panel များ
ဖန်မျှင်ထည်ဖန်လုံအိမ် Panel များ
ဖန်မျှင်ထည်လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု Panel များ
ဖန်မျှင်ထည်အလင်း Panel များ
ဖန်မျှင်ထည်ပလတ်စတစ် Panel များ
ဖန်မျှင်ထည်ခေါင်မိုး Panel များ
Frp insulator တွင်လည်း Panel များ
ရောင်းရန် Frp Panel များ
Frp အမှတ်တရ Panel များ
Glass ကိုခေါင်မိုး Panel များစျေးနှုန်းများ
ဖန်လုံအိမ်ပလတ်စတစ် Panel များ
ဖန်လုံအိမ်ခေါင်မိုး Panel များ
ဒီလိုပါပဲဖန်မျှင်ထည် Panel များ
ပလပ်စတစ်ခေါင်မိုး Panel များ
PVC ခေါင်မိုး Panel များ
စမြှောင်းပုံခေါင်မိုး Panel များ
စဖန်မျှင်ထည်ခေါင်မိုး Panel များ
ပွင့်လင်းဖန်မျှင်ထည်ခေါင်မိုး Panel များ
ပွင့်လင်းခေါင်မိုး Panel များ
အမြင့် temperatuer & ချေးခုခံခေါင်မိုး ...